Robinho oo fal kufsi ah lagu helay & xabsi dheer oo lagu xukumay – Gool FM
(Milano) 23 Nof 2017 – Laacibkii hore ee kooxaha AC Milan iyo Manchester City ee Robinho ayaa lagu helay kufsi uu ka gaystay meel lagu caweeyo oo ku taalla Milano sanaddii 2013-kii iyadoo lagu xukumay 9 sano oo xabsi ah.
Laacibkan 33-jirka ah ee reer Brazil ayaa xilligaa u dheelayay kooxda Rossoneri, wuxuuna shilkani dhacay 22-kii Jannaayo 2013, iyadoo ay fiidkan maxkamad ku taalla Milano ay Robinho iyo 5 kale ku heshay inay wada kufsadeen 22-jir Albanian ah.
Waloow uu xukunkani dhacay oo laacibka gorodda loo surey 9 sano oo xabsi ah misna waxaa ka horreeya dhowr lakab oo rafcaan ah marka la eego hannaanka cadaaladda Talyaaniga.
Haddaba sidaa darteed, laacibka haatan horay lagama xirayo. Robinho ayaa haatan ka ciyaara dalkiisa Brazil isagoo u safta kooxda Atletico Mineiro.
EL: ACM VS AUS 5-1...Kooxda Milan oo usoo baxday wareegga 32-ka EL + Sawirro
Messi, Ozil, Sanchez…(Shax Cajiib ah oo laga sameeyay xiddigaha Bilaashka lagula wareegi karo)